नेपाली गायक - कुमार कान्छा ~ ♫Mantra ♪Of Music►
बावु मनु शाह र आमा तुलसी देबीको कोखबाट कलकत्ताको चिढियामोडमा जन्मेका गायक कुमार कान्छाको नाम संगित प्रेमीहरूका लागि अनौठो नाम होइन । भारतमै जन्मे-हुर्केका भएपनि गायक कान्छाले नेपाली गीतसंगितमा दिएको योगदान अतुलनिय रहेको छ । उनै गायक कान्छा नेपाल आएको बेला फिल्मीखबर डटकमले गरेको कुराकानी संक्षेपमा :-
नेपाल आउनु भएको कति भयो?
- डेढ महिना भयो ।
नेपाली भएर भारतमा नै जीवन बिताउनुको कारण ?
- सानै देखि भारतमै हुर्केको हुनाले पनि त्यहाँको माया लागेको हो तर त्यसो भन्दैमा नेपाललाई माया मार्न खोजेको भने हैन । नेपाल आउने र जाने क्रम भईरहन्छ ।
नेपाललाई माया मार्न खोजेको जस्तो देखियो नि त?
- मैले नेपाललाई माया मार्न नै खोजेको भए मेरो नाम कुमार कान्छा नभएर कुमारको पछी अरू केहि हुन्थ्यो ।
अहिले भर्खरै मात्र गर्नु भएको गीत रेकर्डिङमा नेपाली भाषा भन्दा बढी हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नु भएको थियो नि ?
- त्यस्तो केहि हैन यार । ल हेर्नुस अहिले भर्खर तपाईं सँग 'यार' भनें । धेरै जसो हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्ने हुनाले बेलाबेलामा हिन्दी भाषाको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो ।
बिस्तारै नेपाली भाषा बोल्न छोड्ने त हुनुहुन्न ?
- म सच्चा नेपालीको छोरो हुँ, त्यसैले मैले नेपाली भाषा बिर्सन हुन्न र बिर्सन पनि सक्दिन ।
नेपाल आउनुको कारण ?
- खास गरि म आफ्नो सोलो एल्बम 'साईनो' को तयारीको लागी नेपाल आएको हुँ । यस एल्बममा आलोकश्रीको संगित र धेरै गितकारहरूको साथ रहेको छ । त्यसै गरी अहिले तपाईसँग कुर गर्नु भन्दा केहि समय अगाडी सन्तोष भट्टराईको एल्बमको लागि पनि गीत गाउने अवसर पाएँ । गीत एकदमै राम्रो पनि छ।
तपाईले गीत सुन्ने बित्तिकै मैले नै गाउँछु भन्नु भयो रे ?
- हो । खास गरि म पहिला गितको शब्द हेर्छु अनि मात्र संगित सुन्छु । त्यसपछी संगितकार पनि हेर्छु कत्तिको किचकिचे छ भनेर अनि मात्र म गित गाउने निर्णय लिन्छु । मैले यो गीतमा सबैकुरा मिलेको पाएँ अनि गीत गाउन तयार भएको हुँ ।
शब्दमा के थियो जसले तपाईको मनलाई छोयो ?
- मेरो उमेर अहिले धेरै नै भैसकेको छ र अब मैले कान्छाकान्छीको गीत गाएर मात्र हुँदैन । गीतमा जुन गहिराई हुनु पर्थ्यो त्यो मैले यो गीतमा पाएँ ।
शब्द राम्रो भएर पनि गीत रेकर्डिङमा तपाईलाई निकै समय लाग्यो नि ?
- खास गरेर गीतको शब्दहरू राम्रो भए पनि निकै अफ्ठ्यारो थियो । अर्को कुरा गीत गाउँदा मलाई समयको मतलव हुँदैन । गीतलाई न्याए गर्न म जतिपनि समय खर्चन तयार छु ।
कति बर्षको उमेरबाट गीत गाउन शुरू गर्नु भएको थियो ?
- म ११ बर्षको हुँदा देखि नै गीत गाउन थालेको हुँ । म त्यो बेला कलकत्ता बस्थें । ११ बर्षको उमेरमा म स्कुलबाट भागेर मुम्बई पुगेको थिएँ । त्यो बेलाबाट नै मैले अलि अलि गीत गाउने थालेको हुँ तर बुझ्ने भएर गीत गाउन थालेको पनि आज २५ बर्ष जती भैसकेछ ।
कति बर्षको हुनु भयो ?
- ५० भन्दा धेरै भएँ तर कति भएँ त्यो भन्दिन ।
स्वरले कहिले सम्म साथ दिन्छ जस्तो लाग्छ ?
- मेरो अन्तिम सास रहुन्जेल सम्म मलाई आफ्नो स्वरले साथ दिन्छ जस्तो लाग्दछ ।
तपाईले पहिलो पटक गाएको गीत अहिले सम्झन सक्नु हुन्छ ?
- अवश्य पनि सक्छु । मैले पहिलो पटक गाएको गीतनै सुपरहिट भएको थियो । साईको चलचित्रको 'आमैले भन्थे धाराको पानी' यो मेरो पहिलो गीत थियो जसले आम नेपालीको मन छुन सफल भएको थियो । अहिले पनि यो गीत सुन्ने नेपालीको कमि छैन । त्यही साईनो चलचित्रको सम्झनालाई अझ प्रगाढ बनाउन र आफ्नो गीत गायनको २५औं बर्ष पुगेको अवसरमा मैले अहिले आएर 'साईनो' नामक एल्बम निकाल्न लागेको छु । तर रेकर्डका हिसाबले “पहाडको डाँडाकाँडा हरीयाली छायो……’ भन्ने गीत नै मेरो पहिलो गीत हो । चलचित्रमा चाँही ‘आमैले भन्थे धाराको पानी…।’भन्ने चलचित्र साइनोको गीत हो । जसमा रञ्जीत गजमेरले संगीत दिनुभएको छ ।
अहिलेसम्म नेपाली र हिन्दी गरेर कति गीत गाईसक्नु भयो ?
- एक हजार भन्दा बढी गीत गाईसकेको छु ।
कस्ता प्रकारका गीत गाउँदा आनन्द आउँछ ?
- मलाई नेपाली गीत गाउन पाउँदा सबैभन्दा बढी आनन्द आउँछ । त्यसपछी हिन्दी गीत गाउँदा आनन्द आउँछ र बाँकी अन्य भाषाका गित गाउँदा ।
गाउने प्रेरणा कोबाट पाउँनुभयो ?
- मेरो आमाको रुचि संगीतिर ढल्केको थियो । मेरी आमाले खासगरी लता मंगेशकरको गीत सुनिन्थ्यो । लताजीको स्वरबाट नै म प्रभावित र प्रेरित भएको हुँ ।
अहिलेसम्म कति भाषामा गीत गाईसक्नु भयो ?
- अहिलेसम्म मैले करिब ३५ भाषामा गीत गाईसकेको छु ।
बलिउडको संगित र कलिउडको संगितलाई तुलना गर्नु पर्दा कसरी गर्नु हुन्छ ?
- केहि पनि फरक छैन । खाली भाषाको मात्र फरक हो । भाषाको संगित हैन यो । बिश्वको संगित एउटै हुन्छ ।
नेपालीहरूले कस्तो प्रकारको संगित प्रति झुकाव देखाएको पाउनु भएको छ ?
- बिशेष गरी नेपालीहरोको लोकलयमा आधारित गितप्रति बढी झुकाव रहेको मैले पाएको छु ।
आफूले गाएका गीतहरू मध्ये धेरै नै याद आउने गितहरू सम्झनु पर्दा कुन-कुन गीतहरू सम्झनु हुन्छ ?
- गीत त प्राय धेरै नै सम्झन्छु तर मैले गाएका गीतहरू मध्ये धेरै नै सम्झना आउने गीतहरूमा चलचित्र चिनोको 'बतासले उडाई ल्यायो माया मेरो..', साईनोको 'आमैले भन्थे धाराको पानी..', 'प्रित बिनाको..' लगायतका केहि गीतहरूको सम्झना अलि बढीनै आउने गर्दछ ।
संगितमा लागेर पाएको र गुमाएको कुराहरू के के छन् ?
- संगितमा लागेर मैले केहि पनि गुमाएको छैन , पाएको मात्र छु ।
गायन यात्रामा बिर्सनै नसक्ने कुनै त्यस्तो घटना ?
- हिन्दी चलचित्र 'दिल है कि मनता नहिँ' मा मैले गाएको ' दिल तुझपे आगया..' बोलको गित सुपरहिट हुँदाको बेलाको सम्झना अहिले पनि आउँछ । जुन गीत अहिले पनि मेरै स्वरमा रेडियो, टेलिभिजन, एफ एमहरूमा गुन्जिरहन्छ । त्यो यादलाई यसले पनि ताजा बनाईरहेको छ ।
गायनसंगै अभिनय पनि गर्नु भएको छ रे ?
- हो, मैले ‘लाहुरे’ नामक नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेको छु ।
'रिटाएर लाईफ' कसरी बिताउने योजना बनाउनु भएको छ ? '
- 'रिटाएर लाईफ' नेपालमा आएर 'जय सम्भो' भन्दै बिताउने सोच बनाएको छु ।
संगितमा लागेर कति कमाउनु भयो ?
- संगितमा लागेर केहि नभए पनि मैले करिब ३ करोड नेपालीको माया कमाएको छु ।
उमेर बढ्दै जाँदा स्वरमा निखार आएको महसुस गर्नु भएको छ कि खस्कदै गएको अनुभव गर्नु भएको छ ?
- संगित भन्ने चिज नै यस्तै हो जति उमेर बढ्दै गयो त्यतिनै स्वरमा निखार आउँदै जान्छ ।
संगितको बारेमा दुई शब्द ?
- संगित भनेको साधना, श्रद्वा, भक्ति हो। जुन सबैको लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्तमा कुमार कान्छाको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- कुमार कान्छा भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो । नेपालीहरू छन् भने कुमार कान्छा रहन्छ नत्र भने न कुमार रहन्छ न कान्छा नै । त्यसैले उहाँहरूको माया मेरो अन्तिम सास रहुन्जेल सम्म पाउन सकुँ र म यसै गरी गीत गाईरहन पाउँ |